तेस्रो लहरको कोभिड रोकथाम पूर्वतयारीमा जुटौँ – KarnaliPost Daily
२६ पुष २०७८, सोमबार १३:१६ January 10, 2022 by Karnali Post Daily
जुम्ला । जिबन एउटा आफ्नै सुमधुर गतिमा चलिरहेको यात्रा न हो । कहाँ कहाँ कस्ता भाब ल्याएर आइदिन्छ, पत्तै नहुदो रहेछ ? कतै त्यो यात्रा गन्तव्य सम्म नपुग्दै बिश्वनै आक्रान्त भइरहेको यस कठिन समयमा,कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्गको मेलमिलाप त हुने होइन ?
छ वर्ष पहिले नेपालमा गएको महाभुकम्पले १५ हजार भन्दा बडि मानिसको ज्यान लिनुका साथै देशका विभिन्न स्थानमा बसेका बालबालिका र उनीहरूका परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित नभएका भने हैनन् । नेपालमा भुकम्पको आलो घाउ सेलाउन नपाउँदै हामीले कोरोना भाइरस ंसंक्रमणको जोखिम संग जुद्न परेको छ । दोस्रो नयाँ चुनौतिको सामना गर्न बाध्य छौ । हामीले विगतका ती दिनहरूमा जुन एकताबद्धता देखाएका थियौं, यस महामारीलाई हराउन आज पनि त्यस्तै गर्न जरूरी छ । आफू सक्षम बनौं र सिङ्गो समाजलाइ नै सक्षम बानाऔ । आफू सुरक्षित बनौं र सिङ्गो समुदायलाइ नै सुरक्षित बन्न आग्रह गरौं । हामी जहाँ छौ सुरक्षित बसौ, महामारीबाट आफु बचेर अरुलाई पनि बचाउने अभियानमा जुटौ ।
हामी आफैँ, सुशुचित हुने, आफैँ सतर्क हुने, सामाजिक दूरी कायम राख्ने, हात धुने लगायतका स्वास्थ्य र सरसफाइका नियमहरु पालना गर्ने कुरामा गम्भीर बनौ । अहिले आम हामी नगरिकहरु बाहिर जान रुची देखाउने र घरभित्र गैरजिम्मेवार हुने किसिमको व्यवहार गर्ने, भेला जमघट गर्ने मास्क नलगाउने जस्ता संक्रमण भित्राउने काम गरेको देखिन्छ । त्यस्ता संक्रमण निम्त्याउने काम कसैले नगरौ । बाचेपछि पछि पनि जमघट गर्न सकिन्छ भन्ने भावना राखौ ।
कुनैपनी नागरिकलाइ रोग भएको रहेछ भने भित्रभित्रै रोग संक्रमण भएर उग्ररुप लिनसक्छ । संक्रमण फैलिँदै जान पनि सक्छ, हामीले नियन्त्रणका उपायहरु कडाइको साथ नियम पालना गर्न सक्यौं भने अझै पनि नियन्त्रणमा रहन सक्छ । नियन्त्रणका उपायहरु कार्यान्वयनमा ढीलासुस्ती गरियो,भने बिरामी कहाँ हुन सक्छ भनेर परीक्षणमा ढिलाइ गरियो, भने लकडाउनको पालना न गर्ने र खुकुलो गर्दै जाने हो भने केही दिनमै आगोको फिलिङ्गोले पुरै जंगलनै डढेलो लगाएजस्तो हुनसक्छ ।
हामी ढुक्क हुने स्थिति रहदैन । तर हाल धेरै बिरामी भएका पनि छैनन्, बिरामी भएका पनि गम्भीर भएका छैनन्, त्यसकारण हामीले उच्च सतर्ककासाथ काम गर्नुपर्ने स्थिति हो, । नेपाल सरकार, पर्देश सरकार र स्थानिय सरकार यस महामारीको नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदमहरू चालिरहेको र चाल्ने छ भन्ने हामिहरूलाई अबगतै छ । हामिहरूलाई बेसन्चो भएमा वा अप्ठेरो परेमा नेपाल सरकारले यथाशीघ्र आवश्यक उपचार र सहयोग गर्ने व्यवस्था गरेको पाइएको छ ।
त्यसैले तेस्रो लहरको कोरोना बाट समुदायलाई जोगाउन एकताबद्ध भएर महामारी विरुद्धको लडाइ जित्न सक्षम हुन जरुरी छ । तीनैतहका सरकार तयारी अबस्थामा रहन आबश्यक छ । भने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पनि प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरी तयारी अबस्थामा राख्नुपर्छ । त्यस्तै आइसोलेसन,क्वारेन्टइन लगायतका संरचनाको विकासमा तीनै तहका सरकार नागरिक अगुवा जनप्रतिनिधि जुट्न आबश्यक देखिन्छ ।
भने, तेस्रो लहरको कोरोना महामारीबाट बच्न सचेतना फैलाउन संचार माध्यमबाट प्रचार प्रशारमा जोड पनि उत्तिकै जरुरी छ । अनिवार्य रुपमा मास्कको प्रयोग गरौ,साबुन पानीले हात धौउ,भौतिक दुरी कायम गरौ,तेस्रो लहरको कोरोनाबाट आफु बचौ अरुलाई पनि बचाउ ।
लेखकः आयुशमान थापा गुठिचौर गाउँपालिका जुम्लाका यूवा हुन् ।
Posted in लेख/विचार, शिक्षा, साहित्य
धिताल परिवारको मुख्य आम्दानीको स्रोत बन्यो भैसीपालन माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने सरकारको निर्णय राजनीतिक भेला पनि बन्द गर एमबिबिएस शुभारम्भ गर्न राष्ट्रपति भण्डारी जुम्लामा बालविवाहको चपेटामा किशोरी आमा !